သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတ – A Phaw Mon
ကပ်ဆိုက်တဲ့ အခါ ကာကွယ်ဖို့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဩဝါဒ
ကပ်ဆိုက် တဲ့ အခါ – ( 1 ) ငါးပါးသီလ မြဲခြင်း (2) အသားငါး စားသုံးမူ့ နည်းခြင်း …
ျပည္တြင္းသတင္း / သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတ
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် နောက်တစ်ဆူကို ဖူးမြှော်ရင်း လိုရာဆုတောင်းခဲ့ကြဦးနော်
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား နောက်တစ်ဆူ တွေ့ရှိ ဖူးမြော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းပါ။ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ဆင်အိုင်တောင်အတွင်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးပုံစံတူ စေတီတော်တစ်ဆူကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဆရာတော်အရှင်စန္ဒိမာက မြွတ်ကြားသည် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား နောက်တစ်ဆူ …
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကို စကားမပြောမှာ၊ အဖတ်မလုပ်မှာ ကြောက်နေသလား? အဲ့တာဆိုရင် သင့်ကိုသင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်အရင်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာသိပါသလား။ အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အပြင်သွားဖို့တောင်းပန်နေရတဲ့ဘဝကနေ သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်လိုက်လျောလျောနဲ့ လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ (၁) …
ကြက်ဥဆိုတာ အာဟာရဓါတ်တွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ အစားအစာ တစ်ခုဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ကြက်ဥစားပြီးရင် ကြက်ဥအခွံတွေကို လွှင့်ပြစ်လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ ကြက်ဥခွံတွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ငါတော်တော်မိုက်မဲပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေးမိမှာ …
ကျနော် မိန်းမယူပီးရင် မိန်းမကို ဒီလို လုပ်ခိုင်းမှာ…
ကျနော် မိန်းမယူပီးရင် မိန်းမကို ဒီလို လုပ်ခိုင်းမှာ… မိန်းမ ထစမ်း အခုချက်ချင်းထ မင်းအမေ အိမ်မှာလို အိပ်လို့ မရဘူး…နာရီကြည့်ဦး ၈နာရီ ထိုးတော့မယ်…ကို ရုံးသွား …
သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတ / ႏိုင္ငံတကာသတင္း
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ အထူးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းစား စစ်ဝတ်စုံများ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ မရှိမဖြစ်အရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဟာဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ပါဝင်လို့ နေပါတယ်။ ဒီလို နေရာမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ သူတွေရဲ့ စစ်သားတွေဟာဆိုရင် ကျွမ်းကျင်မှုတွေအပြင် …
(နေ့စဉ်ပဌာန်း အရှည်ကြီးကို မရွတ်နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ပဌာန်းဆုတောင်း)
နေ့စဉ်ပဌာန်း အရှည်ကြီးကို မရွတ်နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ပဌာန်းဆုတောင်း ပဌာန်းအကျယ် မရွတ်နိုင်တဲ့ နေ့တွေမှာ.. သရဏဂုံသုံးပါးနှင့် ငါးပါးသီလ စောင့်တည် ပြီး ဒါလေးကို ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရမ်း …
.ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း.
ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း (၄)နည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ…… (၁)ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းစေရမည်။ (၂)အချိန်မှန်မှန်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၃)ပီပီသသ အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၄)ပြီးလျှင် အမျှဝေ မေတ္တာပွားရမည်။ …
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုးတွေ့လူနာတွေ များပြားလာနေပါပြီ။ ဈေးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လူနေရပ်ကွက်တွေ Lockdown ချနေပေမယ့် မပိတ်ခင်တည်းက ကူးစက်ထားတဲ့လူနာတွေက အခုမှ တစ်ပြုံတစ်မကြီး စုဝေးထွက်ပေါ်လာသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် …
ဖေကြီး သား နောက်ကို ဖိနပ်မပျောက်တော့ ဘူးနော် ဖေကြီး သားကို မငေါက်ပါနဲ့နော်
ဒီသားလေးကိုမှတ်မိကြလားမသိဘူး HIV ရောဂါသည် ဖခင်ကိုယ်တိုင် ဦးဇင်းထံပေးအပ်ပြီး လှည်ကူးကနေခေါ်လာခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်ကပဲ သားငယ်လေးရဲ့ဖခင်ဟာ လူလောကကို လက်ပြနုတ်ဆက်ပြီး အပြီးပိုင်ထွက်ခွါသွားပါပြီ။သားငယ်လေးမှာ အမေရှိပါသေးတယ် အမေရှိပေမယ့်လည်း အမေဖြစ်သူကလည်း …